आज टीकाको दिन नसोच्ने गरी ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य,हेर्नुहोस तोलाको कति पुग्यो? – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Economic News/आज टीकाको दिन नसोच्ने गरी ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य,हेर्नुहोस तोलाको कति पुग्यो?
काठमाडौं। पछिल्ला केहि महिनासम्म निरन्तर उकालो लागेको सुनको भाउ एकैदिन ७ सय रुपैयाँले घटेको छ ।शुक्रबार छापावाल सुन प्रतितोलामा २ सय रुपैयाँले बढेर ९५ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ ।
तेजावी सुन तोलाको ९५ हजार २ सय रुपैयाँ रहेको छ । बुधबार पनि सुन तोलामा ८ सय रुपैयाँले बढेर ९५ हजार ५ सय रुपैयाँले कारोबार भइरहेको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।आज चाँदीको मुल्य भने घटेको छ । बिहिबार चाँदी प्रतितोलामा १० रुपैयाँले घटेर १ हजार २ सय ३० रुपैयाँमा कारोबार कारोबार भइरहेको छ ।
लाखौं पुगेको सुनको मूल्य आज मंगलवार भने पत्या’उनै नसकिने गरि यस्तो भयो !